Mutungamiri weMDCT, VaMorgan Tsvangirai, vanoti vachaita misangano mumatunhlu ose enyika yakanangana nekubvuunza veruzhinji pavamire nenyaya yehurongwa hwekuwumbwa kwemubatanidzwa wemapato pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
VaTsvangirai vakatarisirwa kuparura misangano iyi neChishanu mudunhu reMatabelaland South vasati vaenda kuMatabeland North, Bulawayo, Masvingo pamwe nemamwe matunhu ose munyika.
Mashoko aburitswa nemutauriri waVaTsvangirai, VaLuke Tamborinyoka, anoti kunyange komiti yepamusoro yebato ravo ye National Council yakatambira hwaro hwekuwumbwa kwemubatanidzwa wepato anopikisa pamberi pesarudzo, VaTsvangirai vanoda kupa mukana kuvatsigiri vavo wekupa pfungwa dzavo panyaya yemubatanidzwa uyu.
Mumwe mugari wemuHarare uye ari mutsigiri webato reZimbabwe People First, Amai Leonorah Matutu, vanoti vanotsigira danho riri kutorwa naVaTsvangirai iri.
Kunyange hazvo vanhu vakawanda vachiti mapato anopikisa anofanira kupinda musarudzo idzi akabatana, pane vamwe vatsigiri veMDCT vakaita saMuzvare Kundai Vambe vanoti VaTsvangirai vanofanira kupinda musarudzo idzi vari vega sezvo vachiti vane mukana wakakura kwazvo wekukunda musarudzo idzi vari vega.
MDC-T inoti yakakunda musarudzo dzose dzapfuura asi iri kupomera mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nebato ravo reZanu PF, mhosva yekubirira musarudzo idzi.
Nekune rumwe rutivi, Zanu PF inotiwo yakakunda musarudzo idzi zviri pachena.
Mapato anopikisa anoti nhaurirano dzekuwumba mubatanidzwa pamberi pesarudzo dzegore rinouya dzave pachinhanho chepamusoro asi vanoziva nezviri kuitika munhaurirano idzi vanoti vatungamiri vemapato anopikisa aya vari kuita makakatanwa nekuti achange achitungamirira mubatanidzwa uyu ndiyani.
Zvichakadaro, dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti Zanu PF inogona kuramba iri muhutongi kana mapato anopikisa akapinda musarudzo dzegore rinouya akapatsurana.